Safaaradda Barma ay Ku leedahay Masar Oo La weeraray.(Bayaan) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Safaaradda Barma ay Ku leedahay Masar Oo La weeraray.(Bayaan)
On Oct 1, 2017 264 0
Xarakada Xasam oo kamid ah Xarakaatka Jihaadiga ee ka dagaalama dalka Masar ayaa qaaday weerar Aargudasho ah, kaas oo lagu qaaday safaaradda Dowladda Buudiyada Baarma ay ku leedahay wadanka Masar.
Weerar Loo adeegsaday Qarax miino ayaa lala eegtay dhismaha safaaradda ee magaalada Al-Qaahira ee dalka Masar, kadib markii rag katirsan Xarakada Xasam ay gudaha u galeen safaaradda ayna kusoo guuleysteen iney miina kusoo rakibaan.
Bayaan kasoo baxay Xarakada oo lagu baahiyay barteeda rasmiga ah ee ay Internetka ku leedahay ayay ku sheegtay in Qaraxan uu jawaab u ahaa dhibaatada Buudiyiintu ay ku hayaan Muslimiinta Araakaan oo ay sheegtay Xarakadu iney la kulmayaan dhibaatooyin kala gedisan oo uga imaanaya nidaam lamid ah midka afgembiga ee ka jira dalka Masar, sida lagu sheegay bayaanka.
Bayaanka kasoo baxay Xasam waxaa intaa loogu daray iney la qeybsanayaan Muslimiinta Baarma dhibaatada ay la kulmayaan, ayna yihiin hal jasad oo qur ah, waxaana Xarakada Xasam ay noqoneysaa xarakadii ugu horeysay oo jawaab ficil ah ka bixisa gabood fallada ay la kulmayaan Muslimiinta Caalamka.
Weerarka lagu qaaday Safaaradda wuxuu dhacay maalintii shalay xilli Galab ah, lamana soo sheegin waxyeello rasmi ah oo ka dhashay weerarka.